ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: ခို
မဒမ်ပေါရဲ့ စာရော ပုံပါ မိုက်တယ်ဗျို့...
အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ထားတာ အိုင်ဒီယာ ကောင်းပါပေတယ်။
ကိုပေါရဲ့ ငယ်စဉ်ပိန်ပိန်ပါးပါးဘ၀ကနေ အခုအချိန်အထိ ဒီလို မှတ်တမ်းတင်လေးများ ရှိရင်လည်း လုပ်ပါဦး။
ဒါလေးကိုဖတ်ရတော့ အတောင်အလက်စုံပြီး အပျံသင်လို့ တတ်သွားရင် အသိုက်လေးကို စွန့်ပြီး ဝေးရာကို ပျံသွားတတ်တဲ့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ သဘာဝအကြောင်း တွေးရင်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ်...
သဘာဝဆိုတော့လဲ... အင်း... သဘာဝပေါ့လေ...
မဒမ်ပေါရဲ့ ဖိုတို အက်ဆေးလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဆန်းနေပါတယ် လှလဲ တကယ်လှပါတယ်...
နောက်ကိုလဲ အခုလို စာလှလှလေးတွေ အများကြီး ရေးပါအုံး...း))
အံမယ်လေး...ဒေါ်ပန်ဒိုရာ....တတ်နိုင်ပါပေ့ကွယ်။ “အသက်ကြီးပြီတို့၊ အရမ်းဝနေတယ်”တို့ တလုံးတပါဒမှ မပြောဘဲ စကားလုံးတွေကို ကစားပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်ပေါ်လွင်အောင် ဝိနည်းလွတ် သရုပ်ဖော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကဒေါင်းစကားနဲ့ ပြောရရင် ဖတ်သူမှာ မျက်ရည်များတောင် ငေါက်တောက်ပန်းထွက်ချင်တယ်။
မဒမ်ပေါက ကွန်မင့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသတဲ့ဗျိုး။
ကလောင်သစ်ကလေးကို လာအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဒမ်ပေါဟာလည်း သက်ဝေလိုပဲ လူမှန်ရင် နှစ်ကျပ်ခွဲ တလုံး နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသူ တယောက်ပါ။
မဒမ်ပေါရေးတာရော ဓာတ်ပုံတွေရော သဘောကျလိုက်တာ။ ကိုပေါရေးတာထက်တောင် ကောင်းသေး။ (ဟဲဟဲ အဲဒီလို ကိုပေါမျက်နှာကြီး ရှုံ့တွသွားမလား မသိဘူးနော်။ နောက်တာပါ။ တကယ်ကောင်းပါတယ် မဒမ်ပေါလက်ရာက)
ခုလို တဆင့်ချင်း ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တခုတ်တရ သေချာမှတ်တမ်းတင်ထားတာလည်း အဟုတ်ကို ချီးကျူးပါတယ် မဒမ်ပေါ။
ဒါနဲ့ ကိုပေါရေ ဘာလို့ ဇူးဇင်တွေ တပ်ထားတာတုန်း။ နိုကိုဇူးဇင် မီကိုဇူးဇင်ကို အားကျလို့လား။ သူတို့ကတော့ ရှဲဒိုးလို့ ပြောကြတာပဲနော်။ မဒမ်ပေါကတော့ ရှဲမဒိုးလောက်ပါဘူး။ :)
ပေါဇူးဇင်မိသားစုရဲ့ စာတွေဆက်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ။ ဟိုးတစ်ခါတုန်းကလည်း ပန်းပုံလေးတွေ ဒါ့ပုံရိုက်တင်သေးတယ်နော် ။ မိသားစုလိုက် စာတွေရေးပါဦး ။
သဘောကျတယ်။ ခိုလေးတွေကို အကြောင်းပြုလို့ အိမ်နီးချင်းလူတွေ စုပေါင်းဆုံဆည်းရာ focal point လေးတစ်ခုရသွားတာပေါ့။ စာနဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့ အလွန်လှပလိုက်လျောညီထွေတယ်။ စလုံးကလူတွေ ဓါတ်ပုံ ရိုက်တတ်ပုံများ အိမ်ရှင်မတောင် ဟင်းချက်နေရင်း ဖြစ်သလိုလက်ညှိုးတစ်ချက်ကွေးလိုက် ဂလိုပုံကောင်းလေးတွေထွက်တယ် ဆိုတာ သက်သေပြသွားသလိုပဲ။
မီး.. နောက်ထွက်မယ့် စာအုပ်မှာ မပြောမဆိုယူသုံးအုံးမှ :B
ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ပုံကြည့်လိုက်၊ စာဖတ်လိုက် နဲ့မို့ ကောင်းလိုက်တာ.. ဒါမျိုး ကြည်ကြည်လေးတွေ ဖတ်ချင်ပါတယ်။ ရေးပြီးသားရှိရင် တင်ပါအုံး။
ဓာတ်ပုံရိုက် တော်တာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။ ကိုပေါ ရိုက်ချက်နဲ့ မဒမ်ပေါ ရိုက်ချက် အကွာကြီး ကွာသလိုပါပဲ။ စာရော ပုံမှာပါ အားပေးလျက်ပါ။ :)
မဒမ်ပေါရဲ့ လက်ရာလေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ ရေးထားတာရော ပုံလေးတွေရော စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေ များများရေးပေးပါ ... (မဒန်ပေါမှ သွားတက်ကလေးများပေါ်အောင် ပြုံးစေ... )
(ကိုပေါမှ မန့်သူထံ ညက်စောင်းတစ်ချက် ပစ်ထိုးစေ ...း))))
ဇူးဇင်တွေ တပ်ရတာကတော့ စင်တင်ကလောင်သစ်ကလေးလို့ ကြော်ငြာထားတာနဲ့အညီ လိုက်ဖက်ညီအောင် နာမည်ပေးလိုက်ရတာပါဗျိူး။ အင်းလေ မြန်မာပြည်က ဟို ဘက်ဆဲလား တွေကို အားကျတာလည်း ပါတာပေါ့။း-)
>>>>ခပ်မြင့်မြင့်.... မိသားစုလိုက်တော့ မလုပ်ပါရစေနဲ့။ သမီးက ကျနော့်မကောင်းကွက်တွေ လူသိအောင် ရေးချင်လို့ ဘလော့ဂ်စပေါ့တ်လေးတခုလောက် ထောင်ချင်တယ် ပြောဘူးလို့ မျက်ခုံးလုပ်နေတာ။
>>>>ကိုဘွိုက်ဇ်.... ဆလု၊ ဆလု လား။ ဂလု... ဂလုလား။ ရသမျိုးစုံပေးတယ်ဆိုတော့ ခိုဥပြုတ်တို့ ခိုကြော်တို့ စားချင်နေသလား တွေးမိလို့ပါ။
>>>>ခင်ဦးမေ..... ဒါလည်း ခေတ်စားနေတဲ့ အထဲက တခုပဲ။ KMSL ကို ကင်မရာတလုံးနဲ့ လွှတ်လိုက်ပြီး စာရေးခိုင်းပေတော့။း-)
>>>> ဒီလိုဇူးဇင်/ဟိုလိုဇူးဇင် .....
ဟိုက်ရှာလပတ်ရည်..... ဒီတယောက်က ကလောင်ကိုရော၊ နည်းပညာပါ ကူးယူဖို့ ကြိုးစားနေပါကလား။
>>>> မိုးချိုသင်း ..... မဒမ်ပေါရဲ့ လက်ရာ ကဗျာတွေ ရှိသေးတယ်။ သူ့ကိုယ်ပိုင် ပရိုက်ဗိတ်ဘလော့ဂ်မှာ ရေးထားတာ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက။ နောက်ပိုင်းမှာ တင်ပေးပါ့မယ်။
မှန်တယ်ဗျ။ နတ်သုဒ္ဓါတွေချည်း ကျွေးလွန်းပြန်ရန်လည်း လူတွေက အီပြီး ငပိရည်ကလေးကို တောင့်တတတ်ကြတယ်....း-) (အတည်ပြောတယ် မထင်နဲ့ဦးနော်)
>>>> တီတီဆွိ ..... လာမယ်၊ ကြာမယ်... ကွန်မင့်ကို မျက်မှောင်ကြုပ်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါတယ်။
လာရောက် အားပေးသွားသူအပေါင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုဖြတ်သန်းပြီးရိုက်ထားလို့မဒမ်ပေါရဲ့ စိတ်ရှည်မှု့ကို
အစ်မရဲ့ အိုင်ဒီယာ ကောင်းလိုက်တာ။
အကောင်လေးတစ်ကောင် အလကားနေရင်း သေသွားတယ်။ ခိုစုံတွဲက ဘယ်သွားပြီး ဘာလုပ်နေကြလို့ အကြာကြီး ပစ်ထားရတာလဲ လို့ တွေးနေမိတယ်။
ဒီမှာကလည်း ငှက်တွေ့ရင် “ ဒါ...ကြော်စားလို့ရတယ်” လို့ တွေးမယ့်လူ ရှားပေတာကိုး။
National Geographic အသေးစားမျိုးကြည့်လိုက်ရသလို ကောင်းပါတယ်။ မဒမ်ပေါရဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ စာသားတွေ ကောင်းလို့ ကွန်မန့်ရေးလိုက်မိပါတယ်။
နောက်ကိုလည်း အခုလို အသစ်ဝယ်ထားတဲ့ နှစ်ကျပ်ခွဲနဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးတွေ ရေးပါဦး။
မဒမ်ပေါရဲ့ ငှက်ကလေးတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ သံယောဇဉ်လေးတွေကို သရုပ်ဖော်ထားတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ်... ပုံလေးတွေကို သေချာ စနစ်တကျ ရိုက်ထားတယ်....
Ko Paw: I suggest to tarnslate in English and post to Strait Times. It can be social harmony article in HDB from Myanmar PR's point of view.
My idea is nothing realted to politics but we do needanest for time being while we are at Singapore (when we needalittle nest likealittle dove).
Indirectly the Government should care us like your neighbor,Chinese Uncle.
If I sounds like pro-government or pro-LKY, please delete my comment.
By the way, I regularly visit your blog and like your view.
It is not time for verbal sucking
@ST. After Spore's elections perhaps!!!
What you have suggested will make
things worse (Burmese will be targetted). Everycountry loves
hot chicks coming down to their
country but not La Das coming
to their home to nest. We are
sad to say it but La Das in
their view. My2cents is that contemporary Singapore political environment is not right for throating or sucking. Try another time mate!
မဒမ်ပေါဇူးဇင်က ကလောင်သစ်ပေမယ့် ရွက်ပုန်းသီးကလေးဖြစ်မယ်။ သိပ်ကောင်းတာပဲ၊ ရေးထားတာ...။ ကိုပေါကို ကျော်တက်သွားပြီ :P
I gotaworry while the couple pigeon left their babies.
Love your third picture, very well taken. And your post as well, very well written.
ဟူး.. တော်သေးတာပေါ့ဗျာ၊ ခိုမဟုတ်ပဲ တခြားငှက်တကောင်ကောင်များ ပေါက်လာမလားလို့ စိတ်ပူလိုက်ရတာ.. အဲဒါဆို ခိုမတော့ ရှင်းလို့မပြီးတော့ဘူး..
ညီမလေးရေ... ရင်ထဲကို ထိသွားတဲ့ဆောင်းပါးလေးပါ... ခိုပေါက်လေးတွေထားပြီး သူ့ ဖေရောမေပါပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အတော်မကောင်းလိုက်တာ... ခိုလေးတကောင်သေးသွားတယ်ဆိုတော့ ငိုတောင်ငိုချင်မိတယ်... အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးက အတော်ကြင်နာတတ်တာပဲနော်.. ဒီနိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးသူတွေတွေ့ ရခဲသလားလို့ ... တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးကို ခုလို ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တာ တွေ့ ရခဲတာမို့ ကျေးဇူးပါညီမရေ... ခိုဥကို ခုမှမြင်ဖူးတာ... နောက်အဲဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဆို တို့ ကိုလက်တို့ လိုက်နော်... ငှက်လေးတွေချစ်တတ်တာသိတယ်မိုလား
ပထမဦးဆုံး ဖွင့်ပွဲမှာ ကောင်းမွန်သော တင်ပြပုံကြောင့် ဘော်ဒါဘော်ချက်တွေနဲ့ စည်ကားသိုက်မြိုက်နေတာတွေ့ရလို့ ၀မ်းသာကြောင်းပါ။
စိတ်အ၀င်စားဆုံးက ဘာကြောင့် ခိုမွေးကင်းစလေးတွေကို ခိုလင်မယားက ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်လောက်ကြာ ပစ်ထားပြီးမှ ပြန်လာတာလဲ။
ဒါ ခိုတွေရဲ့ သဘာဝလား။ ဒါမှမဟုတ် …
စာရေးသူအနေနဲ့ ထပ်မံ ရှာဖွေ ဖြည့်စွက်ပေးရင် ပိုပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပါ။
စိတ်ထဲကနေ ဒီကောင် အချွန်နဲ့ မပြီလို့ မထင်စေချင်ပါ။ ဟီး ဟီး …
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပို့စ်ကောင်းများ ဆက်တိုက်ရေးသားနိုင်ပြီး ကိုပေါလည်း လက်အမြဲ ညောင်းနိုင်ပါစေ။
ကိုပေါက ကျွန်မပထမဦးဆုံးတင်တဲ့ Cookatoo အကြောင်းပို့စ်မှာ မဒမ်ပေါလည်း ငှက်တွေကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း မှတ်ချက်လာရေးဖူးတာ အခုမှ ပြန်သတိရတယ်။ ကျွန်မလည်း တိရိစ္ဆာန်ထဲမှာ ငှက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ငှက်တွေရဲ့ အလေ့အထကို လေ့လာရတာ သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ငှက်ကလေးတွေကို မဒမ်ပေါက ဒီလောက်အထိ စိတ်ဝင်တစား အချိန်ယူဓါတ်ပုံစောင့်ရိုက်ပြီး တင်ထားပေးနိုင်တာ တော်တော်ကို စိတ်ဝင်တစားရှိလို့ဆိုတာ ယုံသွားပြီ။ ဒီလောက်အထိ အချိန်ယူနိုင်ပြီးမှတော့ နောက်တခါတင်ဖြစ်ရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် အဲဒီငှက်ရဲ့ သဘောသဘာဝလေးပါ အင်တာနက်က ရှာပြီးနည်းနည်းဖြည့်ရေးပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ မဒမ်ပေါက ဓါတ်ပုံရိုက်လည်း တော်တော်ကောင်းတယ်နော့်။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် မဒမ်ပေါကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်ကျသွားတယ်ဗျို့...ကိုပေါလက်ရာထက် ပိုကြိုက်တာက နွေးထွေးမှုလေးပါနေလို့... ပိုလူသားဆန်တယ်...။
ဟမ်...အဲသလို ဆိုပြန်တော့ တောင်တောရယ်သာ ဆိုလိုက်လို့ မြောက်တောက အလိုလို ငုပ်သွားတယ် ဖြစ်အုံးမယ်။
တလိုင်းစီပေါ့ဗျာ...ဆက်ရေးပါ ဆက်ရိုက်ပါ မဒမ်ပေါဇူးဇင်ရေ စောင့်မျှော်အားပေးပါ့မယ်...
ကျနော်တို.ဘလောက်မှာလဲ လာဥသေးတယ်ဗျ..documentry မရိုက်လိုက်ရတာ နာလိုက်တာဗျာ..အဲ ကိုပေါခိုမတော.မဟုတ်လောက် ဘူး